Maxaa lagu arkaa Senegal, dal cajiib ah oo isbarbar dhiga | Safarka Absolut
Maxaa lagu arkaa Senegal
Ka jawaabida su'aashan ku saabsan waxa lagu arko Senegal waa mid aad u fudud. Sababtoo ah wadankan yar ee Galbeedka afrika waxay leedahay soo jiidasho badan oo kaladuwan oo aan qori karno dhowr maqaal oo loogu talagalay iyada iyo dadkeeda soo jiidashada leh.
Senegal waa wadan isbarbar dhiga oo aan caadi ahayn in laga tago dhulalka lamadegaanka sida kuwa Lompoul meelaha cagaaran iyo dhirta cagaaran sida Xasiloonida, dhulkii Wuxuu siiyaa, ama magaalooyin caalami ah sida caasimada, Dakar, ilaa tuulooyinka aqallada leh sida kan ku jira Iwol. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waddanka Afrika waa qurux dhab ah oo mudan in la booqdo. Haddii aad damacsan tahay inaad sidaas sameyso oo aad rabto inaad ogaato waxa lagu arko Senegal, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Waxa la sameeyo iyo waxa lagu arko Senegal
1.1 Dakar, caasimada iyo magaalada ugu muhiimsan ee Senegal
1.2 Jasiiradda Gorea, waxa ugu dhaqdhaqaaqa badan ee lagu arko Senegal
1.3 Lake Retba ama Pink Lake
1.4 Tuulada Iwol, oo ku taal bartamaha dalka Bassari
1.5 Lamadegaanka Lompoul, waa isbeddel buuxa oo u dhexeeya waxa lagu arko Senegal
1.6 Casamance, oo ah dhulkii Diola
1.7 Kaydka dabeecadda Bandia, waa yaab kale oo lagu arko Senegal
1.8 Saint Louis, caasimada qadiimiga ah
2 Waxa lagu cuno dalka Senegal
3 Goorma ayey fiicantahay in loo safro Senegal
4 Sida loo tago Senegal
5 Talaalada, si degan loogu raaxeysto waxa lagu arko Senegal
Waxa la sameeyo iyo waxa lagu arko Senegal
Hab wanaagsan oo lagu barto Senegal waa in laga bilaabo magaalo madaxdeeda, oo ah magaalo caalami ah oo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo qof. Meesha ay ku taal qaybta galbeed ee dalka, ee Jasiiradda Cape Verde, ayaa ka dhigtay deked ganacsi oo muhiim ah.
Dakar, caasimada iyo magaalada ugu muhiimsan ee Senegal
Waxay ahayd xarunta maamulka ee Galbeedka afrika Faransiis, oo ay ka mid yihiin Morocco, laga soo bilaabo bilowgii qarnigii XNUMX-naad iyo markii dambena waxay noqotay caasimada dalka, taas oo ka dhigtay xarun maaliyadeed iyo ganacsi oo muhiim ah, iyo sidoo kale diiradda dhaqameed ee ugu weyn Senegal.
Haddii aad rabto inaad ogaato garaaca wadnaha, waxaan kugula talineynaa inaad ku lumiso jidadka cidhiidhiga ah ee ay leedahay Medina, Halkaas oo aad ku arki doontid gaari-fardoodyo iyo guryo leh jikooyin furan oo bixiya suxuunta caadiga ah. Iyo sidoo kale inaad booqato suuqyadooda sida tan Kermel, oo leh alaabada cuntada, iyo tan Sandaga.
Sida taallooyinkeeda, waa inaad ogaataa Masjidka Weyn ee Xasan II, dhisme culus oo loo dhisay xuska xorriyadda dalka; ah Katidralka Marwadeena Guusha, oo ah macbadka ugu weyn ee Kaatoliga ee Galbeedka Afrika oo dhan, iyo Madaxtooyada oo leh beero quruxsan. Laakiin wax walba ka sarreeya, waa inaad aragtaa Taallada Renaissance ee Afrika, farshaxan weyn oo ku dhow konton mitir oo naxaas ah oo ku yaal meel buur ah oo ka eegta Badweynta Atlaantik.
Arintaan la xiriirta caarada Almadies, oo aad ugu dhow caasimada, waa meesha ugu galbeedka badan Afrika oo dhan waxayna kuu soo bandhigeysaa cajiib xeebaha si aad ugu tababbartid dabaasha iyo ciyaaraha kale ee biyaha.
Taallada Renaissance ee Afrika
Jasiiradda Gorea, waxa ugu dhaqdhaqaaqa badan ee lagu arko Senegal
Haddii aad rabto shoog dhab ah inuu ku dhex maro jirkaaga, waa inaad aragtaa jasiiradda Gorea, oo soddon daqiiqo ku jirta doon ka timid Dakar. Sababtoo ah laba qarni, inta u dhaxaysa qarniyadii toddobaad iyo sagaal iyo tobnaad, waxay ahayd barta ugu weyn ee uruurinta addoomo qaaradaha oo dhan. Waxaa lagu qiyaasaa in ku dhowaad labaatan milyan oo bini aadam ah ay sii mareen jasiiradda si ay markii dambe u soo galaan dad aad u tiro badan oo Ameerika ah iyo in ilaa lix milyan ay naftooda ku waayeen safarka.
Maanta waa Dhaxalka aduunka iyo waxyaabaha ku jira, si sax ah, wicitaanka Guri addoomo. Laguguma talin dadka aadka xasaasiga u ah, maxaa yeelay waxay kaa tagi doontaa inaad dareento mid la mid ah kan aad leedahay ka dib markaad booqato xerada firaaqada.
Lake Retba ama Pink Lake
Sidoo kale waxay u dhowdahay Dakar waa haro gaar ah oo asalkeedu ku jiro xaqiiqda ah, inta lagu jiro xilliga qalalan, dheeh biyaheeda casaan. Sharaxaad cilmiyaysan ayaa loo hayaa. Waxay ugu wacan tahay jiritaanka badan ee algae Dunaliella salina, taas oo soo saarta midab casaan ah si ay u qabato iftiinka qoraxda.
Waxay kaloo leedahay xaddi milix badan, taas oo sahlaysa in la sabeeyo, sida Badda Dhimatay oo kale. Xaqiiqdii, waxaa jira dhowr warshadood oo cusbada ku yaal aagga waana xiiso leh in la arko sida shaqaalaha u shaqeeyaan Waxay cusbada uga soo saaraan si farshaxanimo leh. Iyaga ayaa lagu xoqay subagga shea si looga hortago daxalka waxayna ku qoyan yihiin laabta biyaha. Ulaha, waxay ku jejebiyaan dunuubta milixda xagga hoose ka dibna way xoqaan si ay ugu ridaan doonyo taageeraya ilaa tan tan ah.
Lake Rosa sidoo kale waa loo yaqaan maxaa yeelay waxay ahayd hadafka ah Isku soo baxa Paris-Dakar inta lagu jiro daabacadaha kala duwan ee tartanka baabuurta caanka ah.
Haro casaan ah
Tuulada Iwol, oo ku taal bartamaha dalka Bassari
Haddii aad rabto inaad dib ugu noqoto wakhtiga, waxaan kugula talineynaa inaad soo booqato magaalada Iwol, mid ka mid ah xarumaha taariikhiga ah ee waddanka Bassari. Waxay ku fadhiyaan buur dusheeda, dadka degan waxay ku nool yihiin aqallo yaryar oo aan lahayn koronto iyo biyo ay cabbaan. Intaas waxaa sii dheer, waxay ilaashadaan dhaqankooda gaarka ah ee dharka iyo xitaa lahjadiisa. Laakiin wax walba ka sarreeya, aaggan koonfurta Senegal ayaa u taagan dhirayn dhir taas oo dheehisa muuqaalka cagaaran.
Lamadegaanka Lompoul, waa isbeddel buuxa oo u dhexeeya waxa lagu arko Senegal
Haddii tii hore ay ahayd aag cagaaran oo midab leh, waxaan si qoto dheer u beddelnay deegaanka. Sababtoo ah meesha xigta ee aan rabno inaan kugula talinno waa lamadegaanka Lompoul. Ma ahan wax aad u weyn laakiin waad ku dhex lumi kartaa fiditaankeeda hoosta iyo, wixii ka sarreeya, waxaad ku raaxeysan kartaa a qorrax dhaca cajiibka ah.
Casamance, oo ah dhulkii Diola
Waxaan ku laabaneynaa caleenta koonfur ama koonfur galbeed si aan kaaga warranno Casamance, oo aan waxba ka hinaasin meelaha ugu wanaagsan kuleylaha. Cagaar oo ku badan beeraha cambaha iyo bariiska, waa dhulkii Wuxuu siiyaa, qowmiyad animism ah oo waliba leh qaab nololeedkeeda gaarka ah.
Laakiin Casamance sidoo kale waa gobol is-khilaafsan kaligiis. Sababta oo ah waxa ku jira Goobaha dalxiis ee ugu sarreeya Senegal. Arrintu ma ahan kuwa aamusan jasiiradda carabane, saacad uun bay u jirtaa xeebta oo marinkeeda laga helo waa tuulada kalluumeysiga Elinkine.
Laakiin haa deegaanka Kab Skirring, dalxiiskii ugu dalxiiska badnaa dhamaan Senegal ee xeebaheeda cajiibka ah. Intaas waxaa sii dheer ku raaxeysiga, ha iloobin inaad magaalada ku dhex lugeyso oo aad booqato suuqyada farsamada gacanta, halkaas oo aad ka heli doonto qaybo gaar ah oo aad u keeni karto xusuus ahaan safarkaagii aad ku tagtay waddanka Afrika. Hadana hadaad rabto, ku raaxayso mashquulkaaga nolosha habeenkii, oo leh discos iyo baararka meesha muusigga lagu dhajiyo.
Xeebta Cap Skirring
Kaydka dabeecadda Bandia, waa yaab kale oo lagu arko Senegal
In kasta oo ay u egtahay mid cakiran, mid ka mid ah meelaha ugu soo jiidashada badan Afrika waa xayawaankeeda. Sidee ayey u yaraan kartaa, Senegal waxaa ka buuxa keyd dabiici ah. Laakiin waxaan ku talinaynaa mid ka mid ah Bandiya dhawaanshaha ay u leedahay Dakar. Waxay leedahay seddex kun oo hektar oo aad ku dhex safri karto dhammaan dhulka oo aad arkayso noolaha sida wiyisha, Geriga, gisiga iyo xitaa yaxaaska, dabiici ahaan dhammaantood xorriyad buuxda.
Waxa kale oo aad booqan kartaa Niokolo-Koba, halka ay jiraan libaaxyo iyo shabeello, ama ta Beerta Qaranka ee Djoudj Bird, oo loo tixgeliyey mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee ornithological-ka ah ee adduunka ka jira in ka badan saddex boqol oo nooc.
Saint Louis, caasimada qadiimiga ah
Marka laga hadlayo taariikhda waddanka Afrika, mid ka mid ah meelaha lagu arko Senegal ugu yaraan daruuri waa inay noqotaa magaalada Saint Louis. Sababtoo ah waxay ahayd caasimaddeeda illaa laga beddelay Dakar iyo sababta oo ah waxay haysaa muuqaalkeedii hore ee magaalo gumeysi.
Waxaa la aasaasay qarnigii XNUMXaad jasiirad ku taal wabiga Senegal, waxaa loo yaqaan "Venice ee Afrika" waana Dhaxalka aduunka laga soo bilaabo 2000. Waxay ahayd magaaladii ugu horaysay ee reer yurub ka dhisaan dhamaan galbeedka qaaradda maantana waa xarunta ugu weyn ee kalluumeysiga dalka.
Laakiin waxa ugu quruxda badan ee Saint Louis ay ku siiso waa tii hore guryaha qaabka gumeysiga, oo leh wajiyo la caddeeyey, balakoonno alwaax ah oo leh silsilado bir ah oo la farsameeyey iyo saqafyo dhoobo ah oo laba jibbaaran. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa mudan tahay in la arko Qasriga Gudoomiyaha iyo tan qaaliga ah Buundada Faidherbe, kaas oo muddo dheer loo aaneynayay Gustave Eiffel, in kasta oo aysan ahayn wax qabashadiisa.
Ugu dambeyntii, ku raaxee Xeebaha cajiibka ah ka yimid magaalada iyo nolosheeda dhaqameed ee nool. Ku saabsan tan dambe, waxa loogu yeero fardood siraad, iyadoo kumanaan qof ay taabanayaan iyaga tam-tam iyo laambado lagu shido laambadaha waddooyinka oo la mid ah kuwii addoommadii hore isticmaali jireen.
Waxa lagu cuno dalka Senegal
Cudurka caloosha ee Senegal waa natiijada isku dhafka dhaqamada asaliga ah ee Faransiiska iyo Boortaqiiska iyo xitaa wadamada kale ee aagga. Ama, haddii si fiican loo dhigo, qowmiyadaha aagga uu dalku ku yaal.
Maaddooyinka ugu badan ee ku jira cuntooyinkooda waa, dabcan, kuwa laga helo dadka reer Senegal: kalluunka, bariiska iyo badarka sida masago. Iyaga ayaa lagu sameeyaa saxanka qaranka ee dalka. Waxay ku saabsan tahay thieboudienne, kalluun la shiiday oo dhinac ah bariis ama digirad. Intaas waxaa sii dheer, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad isku daydo kan Yassa, taas oo ah digaag leh basasha, mustard, toonta iyo suugada liinta; ah maafe, kaas oo lagu sameeyo digaag, wan ama hilib lo'aad iyo khudrad iyo maraqa looska lagu daro, ama bassi-salaadtaas oo ah xajin degaanka
Sidoo kale waxaa lagula talinayaa caano macaan iyo maraq bariis la yiraahdo chura-gerte; meel cidla ah oo ay ku dhawaaqaan capitaine a la waliin louisiene; wan la dubay ama qoto dheeriyo lait-caillé ama kubbado hilib leh labeen dhanaan.
Macmacaan ahaan, waxaad leedahay tusaale ahaan yabuyam ama mooska iyo qumbaha, oo ah mooska oo leh kareem qumbaha kulul, iyo sidoo kale kan toufam, yogurt lagu qasi jiray biyo sonkor ah. Iyo, si loo cabo, waxay yihiin astaamaha dalka bissap, taas oo la sameeyo iyada oo la karkariyo caleemaha dhir kadibna lagu daro sonkor si aad ugu qabowso, ama bouye, kaas oo lagu diyaariyo midhaha baobab, geedka ugu badan Senegal.
Goorma ayey fiicantahay in loo safro Senegal
Sida ay muhiim u tahay helitaanka waxa lagu arko Senegal waa inaad taqaano waqtiga ugu fiican ee booqashada waddanka. Waxay soo bandhigaysaa a cimilada nooca kulaylaha, celcelis ahaan heerkulka ku dhow soddon digrii sanadka oo dhan. Sidaa darteed, waa inaadan ka walwalin qabow.
Beerta Qaranka Niokolo-Koba
Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah inaad iska ilaaliso roobabka kuleylaha, ee dhaca gaar ahaan xagaaga. Sidaa darteed, waxaa fiican inaad ku safarto Senegal gudaha guga, deyrta ama jiilaalka, gaar ahaan inta udhaxeysa bilaha november iyo february. Waa run in sicirka hoteeladu ay ka qaalisan yihiin xilliyadan dambe marka loo eego xagaaga.
Ha iloobin kareemada si looga hortago cayayaanka. Sida dhammaan meelaha leh cimilada kulaylaha, way badan yihiin waxayna ku siin karaan nacayb.
Sida loo tago Senegal
Wadada ugu weyn ee laga soo galo wadanka Afrika waa Madaarka Blaise Diagne laga bilaabo Dakar, inkasta oo ay aad uga fog tahay magaalada, qiyaastii afartan kilomitir. Waxa kale oo ku yaal garoonka diyaaradaha Kab Skirring. Diyaaradda ayaa ah sida ugu wanaagsan ee lagu tago Senegal.
Waxaad halkaas kaga imaan kartaa wadada Mauritania, Mali ama Guinea laakiin kugula talin mayno. Sababtoo ah waddooyinka xaaladdoodu ma fiicna oo waxaad la kulmi kartaa qasaaro (maahan oo keliya qaab shil ah). Sidoo kale, waxaa jira doomaha ka yimid Faransiiska, Jasiiradaha Canary ama Marooko.
Markaad dalka joogto, waad leedahay doomaha si aad uga tagto Dakar meelaha sida Cap Skirring ama jasiiradda Gorea. Laakiin sida ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee loogu wareego Senegal waa baabuurta fadhiista, oo awood u leh toddobo qof iyo qiime go'an magaalo kasta oo la tagayo.
Baabuur deg deg ah oo ku yaal caasimada
Waxaad sidoo kale qaadan kartaa kuwa caanka ah gaari kufsi, taas oo, in kasta oo magaceedu yahay, aan haba yaraatee soon ahayn. Waa basas qaadayaal ah oo awood u leh shan iyo toban rakaab ah oo bilaabmaya markay buuxsamaan oo keliya; Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin joogsi aan dhammaad lahayn. Nooc ka mid ah kuwan ayaa ah waa maxay, oo qaada ilaa soddon qof oo sameeya jidadka ugu dheer.
Talaalada, si degan loogu raaxeysto waxa lagu arko Senegal
Maskaxda ku hay in Senegal ay tahay Afrika sidaa darteed waxaad u baahan doontaa tallaal ka hor safarka. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad naftaada ku wargeliso Wasaaradda Caafimaadka. Laakiin, guud ahaan, waa inaad ku dhejisaa tallaalada qandhada jaalaha ah, ka dabayl iyo qaar kale. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa a daaweynta ka hortagga duumada.
Gabagabadii, horay waad u ogayd waxa lagu arko Senegal. Waa a wadan cajiib ah leh muuqaal dabiici ah oo aan caadi ahayn, xeebo aan lahayn wax ay ka masayraan kuwa Karibiyaanka, magaalooyin muhiim ah, gastronomy macaan iyo, wixii ka sarreeya, dad saaxiibtinimo iyo martigelin leh. Maxaad sugeysaa inaad ballansato safarkaaga Senegal?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxaa lagu arkaa Senegal
Maxaa lagu arkaa Norway